Abenzi beNkqubo yeeKhonkrithi kunye nababoneleli - China Inkqubo yeeBracket System
Ifom form yokukhwela i-cantilever, i-CB-180 kunye ne-CB-240, isetyenziselwa ukuthulula ikhonkrithi enkulu, njengamadamu, iipali, iiankile, ukugcina iindonga, iitonela kunye namagumbi angaphantsi. Uxinzelelo lwecala lekhonkrithi luthwalwa ziankile kunye nodonga ngeentambo zokubopha, ukuze kungabikho ukuqiniswa okufunekayo kwifom form. Ibonakaliswe ngokusebenza kwayo okulula nangokukhawuleza, uhlengahlengiso olubanzi kubude obunye bokuphosa, indawo egudileyo yekhonkrithi, kunye noqoqosho kunye nokuqina.
Isikrini sokukhusela yinkqubo yokhuseleko kulwakhiwo lwezakhiwo eziphakamileyo. Inkqubo iqulethe iileyili kunye nenkqubo yokunyusa i-hydraulic kwaye iyakwazi ukuzinyuka yodwa ngaphandle kwe-crane.